Ukubona iqela le uqwalaselo lwe Horukon kwi pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ukubona iqela le uqwalaselo lwe Horukon kwi pa parlour
Igama elithi pa soqwalaselo qela, ngokuqhelekileyo ngokuqhelekileyo ukuze amagama angaqhelekanga Ukuba kuwe pa fun, awufuni ukufumana uncedo lwakho, kodwa wathi yoqwalaselo qela ngokwayo okunene. Ekubeni kusenokubakho abantu abaninzi ukuba musa kusetyenziswa kakhulu ukuva, siza amagqabantshintshi inkcazelo yakho. umatshini pa kwakhona, ayisebenzi kwaye ingasayi kubonelela ngazo umbane. Ukulungiselela le njongo, kodwa umbane ofunekayo, ngokuqhelekileyo ikhaya volts 100.
Noko ke, ngenxa yokuba ubonelelo ngamandla kumatshini pa yi volts-24, nibe akukhuthalele njengoko, kuya kuba umsi fly fuse. Ukuba akwenze oko, kuya kufuneka transformer ukuguqula ombane.
ukuba unxibelelene ezinxulumene nale sombane mnye, ndithanda ukuba yoqwalaselo qela. Iqela uqwalaselo, kukho iintlobo ezintathu ezingundoqo. Macala-by-kwicala uqwalaselo inombolo ekupheleni uqwalaselo, olufanayo kukho uqwalaselo ezitenxileyo ezinokwenzeka. Ukuchonga yoqwalaselo qela, akukho kwanyanzeleka ukuba bagcine.
unako kuphela, ndicinga ukuba luluvo olulungileyo ukuba bagcine wangena siqithi idla hit.
iqela uqwalaselo, njengoko unako ususe hit ngokudibene ne iqela elifanayo kunye namanye, kubonakala kubangela ukuba umqondiso uvela conserver eholweni. Indlela ukuchonga uqwalaselo inani mncinane, inombolo yetyala ekupheleni kweqonga leyo hit enkulu inani elifanayo, ayanda amathuba wengxowa yomncinane uqwalaselo inani.
stand engekho ngomzuzu, ukuba ndithi, kubonakala kunzima ukuqonda angayigcini ngokupheleleyo ngaphakathi pa parlour. Ngoko ke, icala-by-icala uqwalaselo, kulula ukuqonda ukuze kuthelekiswa Ekuveleni uqwalaselo ekupheleni odlulileyo. Ukuba
kutheni, ngenxa yokuba kaninzi ezenziwe kwicala-by-ecaleni amane kumaqela amahlanu, wena jackpot kungenzeka ukuba kwenzeke ecaleni kwenye. Ukuze angahambi ngeenxa zonke, uya kubona ukuba mkhanya kwi ndawo. Ukuba icala elingenzi nto-by-kwicala hit e
ecaleni bakwezolimo, kwenyusa amathuba kwicala-by-side uqwalaselo. Ngamanye amazwi, ngokuqaphela olungcono amanani itafile liwubethileyo loo jackpot, inani omncinane Phambili ngaphezulu etafileni enye, ayanda amathuba wengxowa yomncinane uqwalaselo inombolo, xa hit e
ecaleni-by-elicala embetha ngokwendawo na, kubonakala ngathi into yokuba kukho ithuba eliphezulu esecaleni-by-side uqwalaselo. Okokugqibela, le uqwalaselo mgaqweni, uqwalaselo mgaqweni ndim Ndicinga kakhulu kunzima ukuxelela.
siqithi kukho icala ukuba okanye ube umgama omfutshane kude, yaye akazange kwi qela linye, le nto abantu abaninzi uqaphele. Kwimeko enjalo, uze uzame ukuba bagcine hit siqithi buzinze, kusenokuba lula ukuyiqonda.
ngaphandle naliphi na icala elingenzi nto-by-ecaleni, naxa mhlawumbi ekupheleni uqwalaselo izinto ezinjalo ukuba kukho ithuba ophezulu loqwalaselo engagunyaziswanga. Ndicinga ukuba abantu babe lwenu lusazi, kuquka nento yokuba kukho izinto yoqwalaselo qela, kodwa, enyanisweni, onjalo uqwalaselo iqela akukho ayisekho.
Uqwalaselo qela yaziwa, ukuba Asobere ehleli kwesiphatho yoqwalaselo efanayo, kodwa kuthiwa amathuba yokubamba Hit elandelayo iphezulu, kuqwalaselo iqela asinto ivenkile, yindlela leyo ayinakusetyenziswa.
Okokuqala, kunye namagumbi pa waphawula ngenyameko, kuba ikhuseleke ukuba umkhwa onjalo iqalile uphando ukusuka kwindawo nokuba ezingabonwayo. Loo uqwalaselo iqela akukho ayisekho.
Okokuqala, kunye namagumbi pa waphawula ngenyameko, kuba ikhuseleke ukuba umkhwa onjalo iqalile uphando ukusuka kwindawo nokuba ezingabonwayo.